अब ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता : सहि कि गलत ?
२८ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद जीपछिरिङ लामाले ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको सून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । ‘जेष्ठ नागरिकले भत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष कायम गर्नुपर्यो । हामीहरु यहाँ (शहर) बसेकोको त उपचार गर्न सक्दैनौं । पहाडमा बस्नेले उपचार कसरी पाउँछ ? त्यसकारण ६५ वर्षबाट बृद्धभत्ता दिने व्यवस्था गर्नपर्‍यो’ सांसद लामाले भने ।** थप अन्य समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
२०७८ श्रावण २९, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 969 Views